トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvakanakira nekuipira wokurarama zvikwereti chete kadhi
MuJapan, pane muitiro kuti wokurarama chikwereti pachayo haina kupinda. Vanhu vazhinji vane mufananidzo wokurarama chikwereti chikwereti wakaenzana Somuenzaniso, muUnited States Kazhinji wokurarama chikwereti Achitaura kadhi kugarwa, nekuti muJapan pane pfungwa nemishonga yevatengi, pane mamiriro ezvinhu asingaiti pinda nyore.
ropafadzo kazhinji nekuti zvinobatsira
, kadhi kambani anozivisa wokurarama zvikwereti chete kadhi, uye inopa zvinoverengeka makomborero subscribers, tiri kushanda kuparadzira. Achiziva jaya, rakapa kadhi kuti anoshandisa hunhu akachangamuka uye mutambo Popular rinopikisa. Makadhi aya kana vane wemaoresa design, nokuti chaiyo zvinhu chete kana kadhi iri rakapa kana iripo, yava kuwedzera kukurumbira pakati iyi.
Uyewo, wokurarama kadhi rokubhengi chete, akaita Chaibatanidza dzinoverengeka zvakanakira kuti kuparadzira chikwereti kambani. Somuenzaniso, hatina akawedzera rutapudzo reshiyo pfungwa kusvika panguva kadhi kushandiswa. Normal pfungwa rutapudzo mwero iri 0. Against ane 5% pakati, pane kadhi kuti chete 1% of rutapudzo mwero wokurarama zvikwereti chete kadhi. Zvichava kuti vakawanda pamusoro rutapudzo unodiwa. Uyezve, zvave tibatwe tichitarisa pagore muripo, isingadhuri muripo wepagore zvakadai senguva dzose kadhi, kana iwe makasunungurwa.
Zviri ipapo kusvika vakawanda vevaya vari zvacho mhiri kwemakungwa kufamba tsaona inishuwarenzi uye inishuwarenzi kunotenga, riri kwemasanga, akadai umbozha kadhi. The chikwereti kambani, uye kutarisira kuti ichava chikwereti nzanga iri American mhando, tinenge tichishanda achiwana vatengi nokupinza wandei zvikomborero zvakadaro.
chinetso chiri kufarira kubhadhara zvakakwirira vanowanzopedzisira kunongedzera
ribonucleic vakazvitsaurira kadhi iri wokurarama chikwereti zvinoodza demerit riri yazvo nenzira. Somuenzaniso, zviri nokuti chete pamwedzi vamwe mari iri debited, kashoma kuti pfungwa yokuva chikwereti. Zvinogona kuguma yakawanda kunotenga kukwanisa kubhadhara mari, kana chikwereti haina wakaderedzwa kunyange pashure kusvika, muitiro kuva chokuti chete kutorwa chete kufarira zviri kuitika mubereko.
Nakaniwa, kunewo nyaya kuti vanowira vakawanda chikwereti kuburikidza wokurarama zvikwereti, ndiko kushandisa nokungwarira. Most kwemutongo kambani, yave kutanga Indaneti mabasa kuti kunogona kuonekwawo pachake kushandiswa nhoroondo nokuda vatengi, zvakakodzera kuenda kushandisa zvakanaka apo pakuongorora bhinzi.
nokuti wokurarama zvikwereti chete kadhi iri kuti pane zvakawanda zvinobatsira uye ancillary mabasa, asi anokwezva, nekuti panewo vaita chikwereti, tinofanira kuramba kubhadhara mubereko. Somuenzaniso, apo kunotenga yakatarwa kuti 90,000 Yen pamwedzi 10,000 Yen mutsividzo kuti wokurarama chikwereti, achava mari pamusoro 10 nguva pamunoita mubereko, Verengai mubereko achava anopfuura 6000 Yen. With Yakabudiswa matatu 90,000 Yen, kufarira sezvaaidya 2200 Yen, achaberekwa inenge katatu musiyano.
bhuku | wokurarama chikwereti Kana ngozi
kukoshesa hunopiwa kuripwa kufarira kwakadaro kuti dongo, pane nzira yakaiswa kuwedzera chemhosva chitsama romwedzi. Somuenzaniso, kana iwe kuisa ikozvino 300,000 kusvika 200,000 ikozvino, kuti hwandaiva zvitoro miniti raishanda haachinji pamwe kadhi inotevera mwedzi 1 nguva muripo.
Mukuwedzera, muna vakawanda wokurarama mbiri akazvitsaurira rokubhengi, unogona kuva bundu Verengai mashoko anowanika nengaidzo paIndaneti kuti nzira.
bhuku | hombe mutsividzo, mukanyiwa-mari kubhadhara wokurarama mbiri zvinoita?